क्यान्सर मात्रै हाेइन, ब्लड प्रेसर र किड्नी समेत ठीक गर्छ नेपाली जमराले… कसरी उमार्ने र कसरी पिउने? यस्तो छ विधि - Tree Media News
क्यान्सर मात्रै हाेइन, ब्लड प्रेसर र किड्नी समेत ठीक गर्छ नेपाली जमराले… कसरी उमार्ने र कसरी पिउने? यस्तो छ विधि
tmednewsPosted on २६ बैशाख २०७५, बुधबार
काठमाडौं/ न दशैँ न त तिहार, बाह्रै महिना गमलामा जमरा उम्रेकै हुन्छ । त्यो पनि घरका सम्पूर्ण कोठामा राखिएका सयौँ गमलामा । बिहान उठ्ने बित्तिकै गहुँ भिजाउनु, माटो तयार गर्नु, जमरा रोप्नु, उम्रीसकेका जमरामा पानी हाल्नु र तयार भईसकेका जमरा उखेलेर त्यसको रस निकाली बिरामीलाई खुवाउनु काठमाडौँ माकलबारीकी सीता भट्राईको दैनिकी हो । उनलाई बिहान उठेदेखि राती सुत्ने बेलासम्म जमराको स्याहार सुसार गर्दैमा भ्याई नभ्याई हुन्छ ।
जमराको रस मानव जातीको रगत संग ४० प्रतिशतले मेल खाने र यसमा ७० प्रतिशत हरितकणिका रहेको पत्ता लगाईन । यसको नियमित सेबनले मानिसको रक्त बिकार कलेजोको विषाक्तता, पेट र आन्द्राको खरावीलाई समेत ठिक गरिन् । जमराको रसको सेवनले पुराना घाउ, मधुमेह तथा क्यान्सर समेत निको पार्न उनी सफल भईन् । गहुँ तथा जौँको जमराको रस सेवनबाट रोगको उपचार भएपछि डा. विगमोर आफै
संसारका बिभिन्न देशमा पुगेर उपचार गरि धेरै प्रकारका रोगीहरुलाई निको पारिन् । उनले भरतमा समेत जमराको उत्पादन गरेर क्यान्सर लगायत अनेक रोग निको बनाएको प्रत्यक्ष उदाहरण पेश गरिन् । अहिले उनी बिभिन्न देशहरुमा जमरा सेवनबाट उपचार गरिरहेका चिकित्सक, जमरा उत्पादक र सर्वसाधारण नागरिकलाई तालिम दिईरहेकी छिन् ।
नेपालमा बिगत केहि वर्ष यता जमराको प्रयोग भएको पाईतापनि यसले खासै व्यापकता पाउन सकेको छैन । जमराको औषधीय गुणका बारेमा बिभिन्न देशले अनुसन्धान तथा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा हालै मात्र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) ले जमराको बारेमा खोज र अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । जमराका बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिष्ठानअन्तर्गत विज्ञान संकायका प्रमुख जयश्री सिजापतिले जानकारी दिईन् । जमरामा धेरै औषधीय गुण व्याप्त रहेको बताउँदै यसबारेमा प्रचार–प्रसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, जमराको बारेमा लामो समयदेखि खोज–अनुसन्धान गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर तीर्थ बहादुर श्रेष्ठ पनि जमरामा प्रशस्तै औषधीय गुण भएको बताउँछन् । परम्परागत रूपमा मानिसले रोग लागेमा जमराको प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि आधुनिक चिकित्साको विकासक्रम सँगसँगै यसको उपयोग र ज्ञानमा समेत कमी आएको उनको भनाइ छ ।
यसको नियमित सेवनले मानिसमा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक प्रणालीको विकासमा टेवा पु¥याई जटिल रोगको उपचारमा सहयोगी बन्ने उनको भनाइ छ । उनले जमराको बारेमा खोज तथा अनुसन्धान गरि विभिन्न तथ्य सार्वजनिक समेत गरिसकेका छन् ।बहु–उपयोगी जमराको बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार हुनसके उपचार नपाएर रोगले आक्रान्त बनेकाहरूलाई राहत हुनेमा दुई मत छैन । स्थानीय स्तरमै उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने बहुगुणी जमराको उपयोगिताबारे सरकारी तवरबाटै जनचेतनामूलक अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । बेलैमा यसको औषधीय गुणको बारेमा सचेत भई सफल प्रयोग गर्न सके आउँदो पिँढीले यसबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्थ्यो कि ?
Previous Postबाइल डक्ट क्यान्सरः के हो उपेन्द्र देवकोटालाई लागेको रोग ?Previous Post
Next Postशिव श्रेष्ठका छोरा र करिश्मा मानन्धरकी छोरीको डेब्यूNext Post